बुटवलबाट प्रचण्डले बादललाई भने- भो फर्किनु पर्दैन, उतै बसे हुन्छ ! « Khoj Raftar
बुटवलबाट प्रचण्डले बादललाई भने- भो फर्किनु पर्दैन, उतै बसे हुन्छ !
२८ फागुन,बुटवल– नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपाको ओलीतिर लागेका मन्त्री तथा नेतालाई पार्टीमा फर्काउने प्रयास नगर्ने बताएका छन् ।
साविकको नेकपा दुई खेमामा विभाजित हुँदा माओवादी पृष्ठभूमिका रामबहादुर थापा बादल, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह, मणि थापालगायतका नेताहरु प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीतिर लागेका छन् । अध्यक्ष प्रचण्डले ओलीतिर लागेकाहरूलाई फकाउन नलाग्ने बताएका हुन् ।
शुक्रबार बुटवलमा अगुवा कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले उनीहरुलाई फकाउन नलाग्ने बताउँदै विगतमा बिग्रिएका, भत्किएकाहरुलाई फकाउँदा हुन्छ कि भन्नु आफ्नो गल्ती हो भने ।
साथै, उनीहरुलाई फकाउन मन लाग्न छाडेको उनले सुनाए ।
यस्तै, अध्यक्ष प्रचण्डले बरिष्ठ नेता माधव नेपालको उद्धार गर्ने एक मात्रै टेन्सन आफूलाई रहेको बताएका छन्।
प्रचण्डले आफूलाई अहिले अरु राजनीतिक टेन्सन नरहेको बताए । ‘माधवजीहरू फर्किएपछि केपीले जे मन लाग्यो त्यो गर्न सक्ने छैनन्’, प्रचण्डले भने, ‘त्यहाँ ठूलै झमेला हुने वाला छ, मलाईचाहिँ माधवजीलाई कसरी रेस्क्यु गर्ने भन्ने टेन्सन छ।’